बडीगाड महोत्सव तथा न्वागी मेलामा एक कराेड खर्च ? टीकाले रचेकाे महोत्सवको गीत राजेश र रिताले गाए ! (अडियो) | ebaglung.com
२०७५ कार्तिक ५, सोमबार १४:३०	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बडीगाड २०७५ कात्तिक ५ । मंसिर १ गतेदेखि ९ गतेसम्म आयोजना गरिएको प्रथम बडीगाड महोत्सव तथा न्वागी मेला २०७५ को प्रचार मुलक गीतको अडियो तयार भएको छ l जस्को शब्द सिर्जना आयोजक समितिका सास्कृतीक सम्योजक टीका पाइजाले गरेका छन भने गायक राजेश बर्देवा र गायिका रिता केसीले स्वर भरेका छन । राजेश बर्देवा नै म्युजिक एरेन्ज गरेर तयार गरिएको गीतको चौतर्फी प्रशंसा गरिएको छ ।
महोत्सवमा आयोजना गरिएका विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरुको लागि हालसम्म १३ वटा प्रायोजकहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महोत्सव मूल आयोजक समितिले जनाएको छ ।
महोत्सवमा विभिन्न शिर्षकमा गरी ९४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले रु. २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने प्रभु बैंकले रु. ३ लाख सहयोग गर्ने जनाएको छ । अल्का मेलाबाट रु ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ सहयोग आउने भएको छ । महोत्सवमा बडिगाड गाउँपालिकाको कार्यालय मुख्य प्रवन्धक संस्थाका रुपमा रहने भएको छ ।
मेलाको सर्वाधिक राशी पुरस्कार रहेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार बडीगाड युवा मञ्चले सौजन्य गर्ने जनाएको छ । यसैबीच महिला भलिबलको सबै पुरस्कार बडीगाड दलित सञ्जालले गर्ने भएको छ । वडा स्तरीय पञ्चेबाजा प्रतियोगिता दोस्रो पुरस्कार भने रुपन्देहीका दुर्गा बहादुर क्षेत्रीले सहयोग गर्ने भएका छन्।
खुल्ला सास्कृतिक कार्यक्रमको प्रथम पुरस्कार शुभम बर्नलाल फलफूल तथा सब्जी पसल बुटवलले गर्ने तथा वडा स्तरीय सोरठी भैलोको प्रथम पुरस्कार बडीगाड पोलिक्लिनिक खार बजारले गर्ने भएको छ । खुल्ला रेकर्ड डान्स सबै पुरस्कार बडीगाड पोलिक्लिनिकका डा प्रमोद कुमार शाहले गर्ने भएका छन् । खुल्ला कविता प्रतियोगिता सबै पुरस्कार भिमगिठे आदर्श एकेडेमी र वेलफेयर बोडिङ्ग स्कुलले सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
म्याराथुन दौड सबै पुरस्कार गोरे फेन्सी तथा होलसेल पसल बुटवलले गर्ने र खुल्ला सास्कृतिक कार्यक्रम तेस्रो पुरस्कार राधाकृष्ण फेन्सी ग्वालीचौरले गर्ने भएको छ । शैक्षिक प्रदर्शनी दोश्रो पुरस्कार ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकी प्रमुख सुनिल कुमार गुप्ताले गर्ने भएका छन् भने वकतृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार भानु माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक केशव प्रसाद खरेलले सहयोग गर्ने भएका छन् ।
महोत्सवका आयोजित सराय नृत्य प्रथम पुरस्कार बडीगाड गाउँपालिका–९ बल्घासका दिपक थापा काजीले गर्ने भएका छन् । शैक्षिक प्रदर्शनी तेस्रो पुरस्कार ज्योति पुस्तक पसल बागलुङले गर्ने जनाइएको छ । आयोजित वक्तृत्वकला प्रतियोगीताको तेस्रो पुरस्कार बडीगाड गाउँपालिका–९ का हिरालाल आचार्यले गर्ने भएका छन् । आयोजित कार्यक्रमका सबै पुरस्कारका लागि नगद ९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्नेमा हालसम्म ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन भइसकेको आयोजकको भनाई छ ।
बाँकी अन्य कार्यक्रमहरुकाे लागि पुरस्कार सौजन्यदाताहरूकाे खाेजी भैरहेकाे आयोजकले जनाएका छन् ।